Uhulumeni akaphathe izimboni: Jim | Isolezwe
Uhulumeni akaphathe izimboni: Jim
Isolezwe / 4 June 2012, 11:33am /
Unobhala-jikelele we-Numsa, uMnuz Irvin Jim, uthi bazolwela ukuthi izimboni ezibalulekile kuleli zingene esandleni sikahulumeni
UNOBHALA Jikelele wenyunyana yensimbi iNational Union of Metal Workers of South Africa (NUMSA), uMnuz Irvin Jim uthi bazofaka ingcingezi kwi-ANC ukuthi isebenzise iFreedom Charter ngokuthi ifake zonke izimboni ezibalulekile ngaphansi kukahulumeni, kubandakanya izimayini namabhange.
Ekhuluma eralini yokugubha iminyaka engu-25 kwabunjwa iNumsa, uJim wexwayise ngokuthi ukwehluleka kwe-ANC ukusebenzisa iFreedom Charter kungaletha umbhedukazwe kuleli ofana ncamashi nalo osanda kubonakala emazweni ama-Arabhu.
UJim, inyunyana yakhe ezokuba nengqungquthela eThekwini kusukela namuhla uphinde wathi kumele kulungiswe umthethosisekelo, ikakhulukazi owobunikazi bezinto, athe yiwo ozolokhu unikeze amandla abamhlophe.
“Lesi sigaba sichaza ukuthi abamhlophe, abangamaphesenti angu-12, basazoqhubeka nokwengamela umnotho okuyinto eshiya abasebenzi abaningi behlupheka,” kusho uJim.
“Uhulumeni kumele ufake izimayini nezinye izimboni ezibalulekile ngaphansi kwesandla sakhe. NeBhange loMbuso kumele lengamelwe uhulumeni ukuze likwazi ukusiza ngamathuba emisebenzi.”
Uthe bazongena emgwaqweni ukuze baphoqe uhulumeni ukuthi ashintshe uhlelo lwakhe lwezomnotho aphinde aqede ama-labour brokers.
“Njengabasebenzi sifuna ukuthi siye engqungqutheleni yenqubo-migomo ye-ANC siphume kuyo sesiwunqobile umzabalazo wabasebenzi,” usho kanje.
UJim uthe abasebenzi baholelwa imali encane kakhulu nebasiza ekwakheni imijondolo kuphela.
Lo mholi uphinde wathi abantu kumele bangavumi ukuthi baxhashazwe yi-DA ngokubakhohlisa ngalolu hlelo lwe-Youth Wage Subsidy ngoba inhloso yalokhu wukubukela phansi abantu kuphinde kuqhutshwe umkhankaso wokudla igazi labampofu.
“Abantu abangalokothi bavumele i-DA emalokishini nasezindaweni zabo kodwa ayixoshwe ivalwe nje ingasondeli futhi kuphinde kuqinisekiswe ukuthi abaholi bayo abafana noLindiwe Mazibuko abavunyelwa ukusondela ezindaweni zethu emalokishini ukuze sivikele i-ANC. Ngaphandle kwalokho le ndaba ye-Youth Wage Subsidy abayifunayo asihambisani nayo futhi asigudluki kulokho ngoba inhloso yayo wukuthi umuntu aqashwe iminyaka emibili bese emuva kwalokho izinkampani zifune omunye yena zimlaxaze kanjalo,’’ kusho uJim.